ပန်းတစ်ပွင့်က ပြောပါတယ်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပန်းတစ်ပွင့်က ပြောပါတယ်….
Posted by manawphyulay on Jan 8, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary, Poetry, Relationships & Family | 14 comments
ပန်းကလေးတိုင်း မွေးသော လန်းသော ပန်းကလေးများ ဖြစ်ကြပါစေ။
ပန်းကလေးတိုင်း မွေးသော လန်းသော ပန်းကလေးများ ဖြစ်ကြပါစေ။) ဆိုတာက ပွင့်သောပန်းတိုင်းမွှေးပါစေ လို့ပြောတာလား? အဲဒါ တို့ဥက္ကဌ ကြီး မော်ရဲ့စကားပဲ ။ ပွင့်တဲ့ပန်းတိုင်း မွှေးလို့တော့မဖြစ်ဘူးဟေ့… ချူးမရေ တစ်ချို့ပန်းတွေက လူတွေကို မူးမော်စေတဲ့ အဆိပ်သင့်စေတဲ့ ပန်းတွေရှိတတ်တယ်(ဥပမာ-ပဒိုင်းပန်းတို့ ဘိန်းပန်းတို့) အဲဒါကတွေက မွှေးနေလန်းနေလို့ မဖြစ်ဘူး
လူငယ်ကို ပန်းလို့ တင်စားပါ၏
မွေးသော ကို ကောင်းသော ဂုဏ်သတင်း လို့ တင်စားပါ၏
လန်းသော ကို ကျန်းမာ ထက်မြက်မှုကို တင်စားပါ၏
ဆန်အိတ်ထဲက စပါးလုံးပါပေမဲ့.. ဆန်အိတ်လို့ဘဲ သုံးသလိုပေါ့..
ပန်းတပွင့်ကပြောပါတယ် ပန်းဖြူကတော့ အခုတရားရုံးမှာ အမှုရင်ဆိုင်နေရတယ်တဲ့။
သူလည်း.. သူ့မိခင်နဲ့အတူတူ ..နေချင်တာပေါ့တဲ့..။
(ပန်းတွေကို .. အပင်ပေါ်ကနေ..မခူးခြွေကြစေလိုပါ…)
မနောက ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပန်းလေးတစ်ပွင့်ထဲက ပြောတာပါ။ ဒီလိုဘ၀လေးတွေကို လူတိုင်းရောက်စေချင်ပါတယ်လေ…………
ပန်းဆိုတာ အပင်ပေါ်မှာချည့်လဲ မလှတတ်ပါဘူး တစ်ချို့ ဘုရားစင်ပေါ်ရောက်မှတင့်တယ်တာမျိုး တစ်ချို့ကျပြန်တော့ ကောင်မလေးလှလှ တစ်ယောက်ရဲ့ ခေါင်းပေါ်ရောက်မှ ပိုလှလာတာမျိုး ကိုခိုင်ရဲ့ တစ်ချို့ကျပြန်တော့ တော်မ၀င် လူမသုံး ပန်းဖြစ်ရှုံးနေတာတွေလည်းရှိတာပဲ
ဥပမာ- ခွေးလှေးယားပွင့် တို့ ခွေးသေးပန်းပွင့်တို့ ပါ
ကောင်မလေးလှတယ် မလှဘူးဆိုတာ ဘာကိုကြည့်ပြီး ခွဲခြားလို့ရပါသလဲ ဦးနီရှင့် မနော မသိလို့ မေးကြည့်တာနော်…..
ပန်းတစ်ပွင့်ကပြောတယ် .. သူ့ကို ချက်စားရင် အားရှိတယ်တဲ့ …
ဟဲဟဲ .. ဂေါ်ဖီပန်း
ဒါဆို မဝေရေ အားရှိအောင် ဂေါ်ဖီပန်းပွင့် ၁၀ ပွင့်လောက် ပို့ပေးပါဗျို့.
ပန်း တပွင့်က ပြောတယ် သူက ဘယ်တော့မှ မနွမ်းဘူးတဲ့
သူပန်ထားတဲ့×× ပန်းနီနီ××× ကျွန်တော်×× ခဏ ဖြစ်ချင်သည် အာာ.. ဟုတ်ပါဘူး ရောကုန်ပြီ
ပန်းကလေးတွေ လှပစွာဖူးပွင့်သလို လူငယ်ဘ၀တွေလည်း အောင်မြင်ကြပါစေ …
padonmar (79248 Kyats )